Istaraatijiyad Ganacsi khiyaano badan: Tilmaamayaal, Calaamadaha Ganacsi | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyadda Ganacsi khiyaano badan: ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo ku saabsan dib u noqoshada
Ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee leh taariikhda dhicitaanka go'an waxay u baahan yihiin go'aaminta saxda ah ee waqtiga furitaanka, inkasta oo jaleecada hore ay wax walba fudud yihiin, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad gujiso badhanka "CALL / PUT". Qalabka falanqaynta farsamada caadiga ah ayaa kaa caawin doona inaadan khalad sameyn, sidoo kale istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh "Ganacsade khiyaano badan".
Qalabka la isticmaalay wuxuu kujiraa aasaaska aasaasiga ah ee dhamaan meheradaha ganacsiga caan ka ah wuxuuna raacayaa mid ka mid ah mabaadi'da aasaasiga ah ee falanqaynta farsamada "xaqiijinta calaamadaha waa in lagu fuliyaa tilmaamayaal leh algorithms xisaabeedyo kala duwan". Tilmaamaha istiraatiijiyadda wuxuu ka kooban yahay saddex tilmaame:
Kooxda Bollinger (BB) . Tilmaamaha isbeddelka ee celceliska celceliska saddexda fudud (SMA): kuwa sare iyo kuwa hoose waxaa laga beddelayaa midka dhexe iyadoo lagu qiimeynayo heerka weecinta heerka ama sida istiraatiijiyadda ku jirta, iyadoo lagu kordhiyay qiimaha 2.
Dejinta aasaasiga ahi waxay kuu oggolaaneysaa inaad "qabato" 90-95% dhaqdhaqaaqa suuqa ee kanaalka kanaalka maalinta ganacsiga, iyo markay baaxaddu ballaadhan tahay, waxaad ka raadin kartaa calaamadaha ganacsiga laba-geesoodka ah ee xuduudaha ka socda (ganacsiga rogrogmaya). Inta soo hartay 10-15% waqtiga qiimaha uu dhaafsiisanyahay BB daqiiqadahanna waxay kujiraan aragtida istiraatiijiyadda "Ganacsade khiyaano leh" wuxuu furayaa xulashooyin si qiimaha ugulaabo khadka dhexe.
Faa'iidada ugu weyn ee Bollinger Bands oo ah tilmaame kanaalka ayaa horseed u ah calaamadaha isbeddelka gobolka suuqa (uruurinta, qeybinta, iwm.) Iyo xaqiijinta runta ama been abuurka jabsiga maxalliga ah ee heerarka taageerada / iska caabinta muhiimka ah .
CCI (Сommodity Channel Index). Waxay xaqiijineysaa mala-awaalka meertada ah, halkii laga abuuri lahaa fowdo, dhaqdhaqaaqyada dhammaan hantida maaliyadeed (labada lamaane, kripto, kaydka, mustaqbalka, indices). Tilmaamuhu wuxuu xisaabiyaa baaxadda isbeddelka oo wuxuu si sax ah u go'aamiyaa daqiiqadda marka isbeddelku isbeddelo. Astaamaha binary auto, waxaa loo isticmaalaa sida oscillator caadi ah: ka bixida meelaha darafyada ah ee + / - 100 (200) waxay muujineysaa raadinta barta laga soo galo ee jihada ka soo horjeedka isbeddelka hadda socda.
Oscillator Stochastic ah . Qalab caadi ah oo lagu helo xad-dhaaf ama xilliyada suuqyada ee xad-dhaafka ah. Waxay u shaqeysaa sidii miiraha calaamadaha CCI waxayna bixisaa dhibco dheeri ah oo laga soo galo, maaddaama tixraaca kanaalka badeecaddu uu yahay tilmaame isbeddelka guud si tartiib tartiib ah u soo baxa, waadna seegi kartaa xulashooyinka wanaagsan (gaar ahaan waqtiyada yar yar). Isla mar ahaantaana, waa caymis bilowga ah, oo ay tahay inuu marka hore soo galo CCI ka dibna markaa ay soo galaan tilmaamayaasha kale!
Istaraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah «Ganacsade khiyaano leh» ayaa lagala soo bixi karaa internetka iyada oo aan wax dhibaato ah ka jirin. Waqtiga lagu taliyay waa inuu ka bilowdaa -15 iyo wixii ka sareeya, muddada uu dhacayo waa ugu yaraan 3-5 baararka. Haddii ay suurtagal tahay, xir heshiiska marka calaamadda ka soo horjeedda ay soo muuqato!
Mar labaad, waxaan ku xusuusinaynaa in ganacsiyada la furay markii isbeddelka hadda socda uu ku dhammaado iyadoo la xaqiijiyay sicir barar. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida looga ganacsado dib u soo celinta, eeg maqaalka "Dib u celinta qiimaha: fur ikhtiyaar mise maya?" . Xulashada RISE (CALL), shuruudaha soo socda waa in la buuxiyo:
Qiimuhu wuxuu ka gudbaa xadka sare ee kooxda Bollinger ka dibna wuxuu ku noqdaa kanaalka. Eeg calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaariga ah ugu jira meelaha laga soo galo aagga ka sarreeya khadka dhexe;
CCI waxay jabinaysaa heerka -100 hoosta ilaa kor waxaana lagu hagaajiyaa kor;
Stochastic waxay ka baxsan tahay aaga lagu iibiyo (heerka 20). Khadadka ayaa isku gooya khadka buluuga ah ee ka koreeya midka liinta ah.
Xulashada FALL (PUT), calaamadaha ka soo horjeedka waxaa loo isticmaalaa:
Qiimuhu wuxuu ka gudbaa xadka hoose ee kooxda Bollinger oo wuxuu ku noqdaa kanaalka. Barta laga soo galayaa waa inay ka hooseysaa khadka dhexe;
CCI-da, burburka heerka + 100 kor ilaa hoos iyo dhaqdhaqaaqa tilmaame hoos.
Stochastic ayaa ka baxday xad-dhaaf (ka hooseeya heerka 80), khadadka ayaa ka gudbay khadka khadkuna wuxuu ka hooseeyaa kan liinta.
Haddii aad si dhow u eegto jaantuska, waxaad arki doontaa in had iyo jeer shuruudaha xulashooyinka aysan isku mar dhicin isla markaana uu jiro farqi u dhexeeya calaamadaha ganacsiga nool. Su'aal dabiici ah ayaa soo baxaysa: waa inaan sugnaa ama aan galno calaamadaha ugu horreeya ee dib u noqoshada? Calaamadee ayaa noqon doonta calaamadda hogaamineysa?
Ma jirto jawaab sugan; wax walboo waxay kuxiranyihiin astaamaha hantida, waqtiga iyo xaalada hada jirta. Laakiin haddii aad tahay qof bilow ah, waxaad xaqiiqdii u baahan tahay inaad sugto illaa dhammaan shuruudaha istiraatiijiyadda la buuxiyo. Kahor intaadan isticmaalin calaamadaha binariga ee "aan dhameystirneyn", waxaan kugula talineynaa inaad sugto xaqiijinta ugu yaraan hal oscillator, Stochastic waxay si dhaqso leh uga jawaab celineysaa inta udhaxeysa illaa M30, ka dibna fiiri xaalada Bollinger. Haddii qiimuhu ku soo laabtay kanaalka oo uu u dhow yahay khadka dhexe, waa inaad hubisaa in dhaqdhaqaaqu sii socdo oo aad gasho ugu yaraan baarka xiga ee ka sarreeya / ka hooseeya celceliska BB.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary. Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa in aysan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii ay tahay waqti shaqeed la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena .
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah - "Tilmaame Trend + Oscillator" . Haa, waxaa jira CCI oo ah shaandheeye dheeri ah, laakiin ugu horreyntii dhammaan cabbiraadda xawaaraha (qiyaasta) isbeddelka hadda jira, kaliya markaa waxay muujineysaa jihada ay u socoto. Taas macnaheedu waxa weeye in muddooyinka badan ee jira, ay sifiican u shaqeeyaan Tusaha Badeecadda.
Isla mar ahaantaana dib u dhacu wuu sii kordhayaa calaamadaha badan ee muddada-gaabanna waa la waayi doonaa. Qorayaasha qaabku waxay raaceen dariiqa yareynta muddooyinka, ama halkii, waxay ka tageen aasaaska salka oo aan la beddelin, iyagoo isku dayaya inay "jiidaan" xogta ku hoos jirta Stochastic si loo sifeeyo calaamadaha. Natiijo ahaan, labada qalabba waxay u dhaqaaqayaan si isku mid ah, gaar ahaan xilliyada laga soo galo / laga baxo aaggooda aadka u daran.
Sidaa darteed, bayaanka ku saabsan shaandhaynta calaamadaha wadajirka ahi sax ma aha; dhab ahaan, waxaan leenahay kaliya dib udhac yar oo qaraabo midba midka kale ah sababo la xiriira isticmaalka kaladuwan ee miisaamida xisaabinta!
Beddelka waxtarka leh ee CCI wuxuu noqon karaa qaab tilmaamayaasha mugga (xitaa tilmaamayaasha mugga sax). Dhaqdhaqaaqa isbeddelka xiisaha furan wuxuu ku siin karaa macluumaad horumarsan oo ku saabsan sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ay uga shaqeeyaan dheelitirka awoodda udhaxeysa iibsadayaasha iyo iibiyaasha, waxay xaqiijinayaan fikradaha mala awaalka ah iyo sixitaanka muddada-gaaban marka caqliga Oscillators-ka la jebiyo, oo Bollinger wuxuu bilaabaa inuu "gurguurta" "soohdinta kore ama hoose, adigoo siinaya calaamado been ah oo keliya.